Ukwenza kusebenze izinketho "Tele2": "Ngubani ngokuthi" indlela kusebenze isevisi
Umakhalekhukhwini sivaliwe ngenxa ibhetri iphansi, yavulwa ngo imodi emoyeni noma kukhona ukwehluleka zokuxhumana? Kulungile. Ngisho noma isikhathi esithile inombolo yakho ayitholakali, inkampani "Tele2" uzokwazisa eyayifuna ezidinga ukuba sibonise kuzo "ukungabi". Awukwazi kuphela uthole ulwazi mayelana izingcingo ezingabanjwanga, kodwa futhi ukuthola ukuthi bangaki izingcingo futhi ngasiphi isikhathi kwathiwa izinikele "Tele2". Indlela okumele kusebenze isevisi "Ngubani Ngokuthi" ukuthi isebenza kanjani, ukuthi alimise - yilokhu uzobe okuxoxwe ngazo kulesi sihloko.
Ngaphambi sikhuluma kanjani kusebenze amasevisi kanye sekushoneni kwalo, ungathanda uyinike incazelo jikelele. "Ngubani Ngokuthi" - le ndlela ubonakele phambi kwethu ngaleso opharetha mobile isikhathi eside. Umgomo we operation yayo ngosuku wamanje isalokhu injalo. Into kuphela ukuthi ishintshile - ishaja ukusetshenziswa kwaso. Ngokokuqala ngqá ngemva ukubukeka "Tele2" (indlela ukuxhuma isevisi "Ngubani Ngokuthi" sizobheka kamuva) Isevisi inikezwa mahhala.
Kuyingxenye iphakethe eyisisekelo futhi ivuselelwe ngokuzenzakalela kuwo wonke amakamelo (inombolo yokufuna "Tele2", qiniseka ukuthi uhlu lokukhethwa kukho axhunyiwe "okuzenzakalelayo", uzothola ke).
"Ngubani okuthiwa" (e "Tele2"): intengo
Cacisa izindleko langempela isevisi endaweni yakho, sicela uvakashele opharetha mobile ngokuya kwesigaba esifanele uhlu amasevisi. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi ukuxhumeka kumahhala. Inikeza Imali yesevisi nsuku zonke. Ngokwesibonelo, e-Tula esifundeni, kuba amasenti 50.
izinhlelo tariff, ezisetshenziswa for the Internet, futhi zokudayela lingekho. ibhodi. Kodwa emgqeni TP "Black" likhona Imali ekhona ngoba imali plan.
Ukuqalisa ku "Tele2": indlela kusebenze isevisi "Ngubani okuthiwa?"
inkonzo Connect akudingekile, ngoba ukhetho eziyisisekelo futhi afakwe ohlwini enamathiselwe ngodaba "okuzenzakalelayo" umhlinzeki. Nokho, uma ungenawo kukhona imibiko izingcingo ezingabanjwanga ke kukhona izinketho eziningana yilezi:
inketho siyekisiwe (ikhasimende noma isisebenzi kwamakhasimende);
ngenani call ukudlulisa imisiwe ngaphambilini (nge ukudlulisa evumelekile ekamelweni awukwazi ukusebenzisa isevisi "Ngubani okuthiwa");
ngoba isevisi "Ngubani Ngokuthi" ukuze "Tele2" Imali, ngokungabi bikho kwezimali ku-akhawunti, okwanele lolo bhala-off inkokhelo nsuku zonke, kuyakushiswa okwesikhashana.
Izindlela ukuxazulula isimo ngasinye kanje:
kusebenze inketho aphinde, ungasebenzisa umyalo * 155 * 331 # (noma usebenzise umsizi kuwebhu noma okulingana - isicelo kumadivayisi eselula);
ukubuyisela ukudlulisa nesibalo isevisi "Tele2" for ukusebenza efanele inkonzo (esifundeni ngasinye, inombolo ihlukile, uhlu oluphelele ingabonwa kwi ingosi ye-opharetha noma ngokuyimfihlo ngokushayela inombolo call centre);
ukuze lifake izimali ku-akhawunti.
Uma lezi amathiphu musa asize ukubuyisela ukusebenza efanele inkonzo futhi waphuthelwa izaziso ucingo Namanje akafiki, kumele uxhumane isikhungo yothintana naye (ngenombolo 0611).
Kulesi sihloko sithole ukuthi isevisi okukhulunywa kuyinto base contact on "Tele2". Indlela okumele kusebenze isevisi "Ngubani Ngokuthi", uma akusiyo egumbini? Ungenza lokhu bebodwa, usebenzisa amathuluzi we ehhovisi sewebhu (yeselula noma uhlelo lokusebenza ukusebenza, okuyinto i-analog) kanye nokwendlaleka izicelo USSD ejwayelekile.
Siza nokusetha futhi kusebenze amasevisi can kwamakhasimende onguchwepheshe service: udinga nje ushayele inombolo 0611 futhi uchaze isimo.
Sithemba ukuthi lezi amathiphu kuyoba wusizo kuwe.
Thola zonke izindlela indlela flip imali "Beeline" ukuze "Beeline"
"Okusele Live", "MegaFon". Indlela khubaza noma kusebenze isevisi "Okusele Live"
Imemori Wayelokhu kuyo yonke le minyaka. The best sici amafilimu mayelana ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe
Ukupheka nge-kefir: zokupheka ngokupheka izitsha ezahlukene
Informatization emfundweni - ke ... Ubuchwepheshe Ezemfundo Informatization
City KaBraslav: izikhangibavakashi
Lapho baphonse - msvcr120.dll kufayela?
Dula ohlelweni bafudumale. Ukundlula ibhethri: isithombe
Uhlelo State. Nokuthutha kuye eMpumalanga Ekude: amapulani, imigomo, ngezimali, sizoyaphi. Uhlelo Federal ukusekela ukuthutha kuye eMpumalanga Ekude